ရီးယဲလ်အသင်းဟာ ဒီရာသီမှာ မတည်ငြိမ်မှုတွေ များစွာနဲ့ ရုန်းကန်နေရပါတယ်
ရလဒ်တွေ ဆိုးရွားနေတဲ့ ရီးယဲလ်အသင်း ဘာတွေ မှားနေသလဲ
26 Nov 2018 . 2:32 PM
ချန်ပီယံလိဂ်ဖလားကို (၃)နှစ်ဆက်တိုက် ရယူခဲ့ပြီး စပိန်ဘောလုံးလောကမှာ အောင်မြင်မှု အများဆုံးလို့ သတ်မှတ်ရမယ့် ရီးယဲလ်အသင်း ဒီရာသီမှာတော့ ဆိုးဆိုးရွားရွားကို ရုန်းကန်နေရတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ လာလီဂါပွဲစဉ်(၁၃)မှာ အီဘာကို (၃)ဂိုးပြတ်ရှုံးနိမ့်ခဲ့တာကြောင့် အဆင့်(၆)နေရာမှာ ရပ်တည်နေရသလို ခံစစ်ပိုင်းကလည်း (၁၉)ဂိုးအထိ ပေးထားရပါတယ်။ ဒါဟာ (၁၀)စုနှစ်တစ်ခုအတွင်း အဆိုးရွားဆုံး ခံစစ်စွမ်းဆောင်ရည်ပါ။
စီရော်နယ်လ်ဒို Cristiano Ronaldo ၊ ဇီဒန်း Zidane တို့ကို တစ်ပြိုင်နက်တည်း ဆုံးရှုံးလိုက်ရတဲ့ ရီးယဲလ်အသင်း အခုဆိုရင် ရာသီအစပိုင်းမှာပဲ နည်းပြအပြောင်းအလဲ လုပ်ခဲ့ပြီးပါပြီ။ နည်းပြသစ် ဆိုလာရီ Santiago Solari လက်ထက်မှာ ရလဒ်ကောင်းတွေ ပြန်ရလာပေမယ့် အီဘာကို ရှုံးနိမ့်ခဲ့ပြီး အရှိန်တန့်သွားခဲ့ရတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီရာသီမှာ ရုန်းကန်နေရတဲ့ ရီးယဲလ်အသင်း ဘာတွေမှားယွင်းခဲ့လဲဆိုတာ စပိန်နာမည်ကျော် အားကစားသတင်းစာ Marca က အခုလိုသုံးသပ်ဖော်ပြထားပါတယ် . .
ဒါကတော့ ရီးယဲလ်အသင်း ကျရှုံးမှုတွေမှာ အဓိကကျတဲ့ အချက်လို့ဆိုရမယ်။ ရီးယဲလ်အသင်းဟာ ချန်ပီယံလိဂ်၊ လာလီဂါ၊ စပိန်ဘုရင့်ဖလား စစ်မျက်နှာပြင်(၃)ခုမှာ တိုက်ပွဲဝင်ရမယ်ဆိုတာက မေ့နေသလိုပါပဲ။ ဒီစစ်မျက်နှာပြင်(၃)ခုမှာ တိုက်ပွဲဝင်ဖို့ လုံလောက်တဲ့ ကစားသမားအင်အားကို မဖြည့်တင်းခဲ့ပါဘူး။
စီရော်နယ်လ်ဒိုလို တစ်ရာသီကို အနည်းဆုံးဂိုး(၄၀)လောက် သွင်းခဲ့တဲ့ ကစားသမားမျိုးကို ရောင်းချခဲ့ရုံမကဘဲ ကွင်းလယ်အင်ဂျင်လို့ သတ်မှတ်ရမယ့် ကိုဗာချစ် Kovacic ကို ချယ်လ်ဆီးဆီ အငှားချခဲ့ပြီး အဲဒီအတွက် ထိပ်တန်းကစားသမားတွေ ခေါ်ယူတာမျိုးလည်း မရှိခဲ့ဘူး။ တခြားအချက်တွေထက် စီရော်နယ်လ်ဒိုရဲ့နေရာကို အစားထိုးဖို့ မပြင်ဆင်ခဲ့တာတော့ ဆိုးရွားလွန်းတယ်။ နောက်တစ်ခုက သူတို့ခေါ်ယူခဲ့တဲ့ ကစားသမားတွေက ထွက်သွားတဲ့သူတွေနေရာမှာ အစားဝင်ဖို့ အရည်အသွေး မပြည့်ဝတာပါပဲ။
နာဗတ်စ် Navas လို ဂိုးသမားရှိရဲ့သားနဲ့ ကော်တိုအာ Courtois ကို မလိုအပ်ဘဲ ခေါ်ခဲ့သလို ညာနောက်ခံလူအတွက် အိုဒရီယိုဇိုလာ Odriozola ကလည်း အရေးတကြီး လိုအပ်တာမျိုး မဟုတ်ပြန်ဘူး။ New No7အဖြစ် သတ်မှတ်ခဲ့တဲ့ မာရီယာနို Mariano က အရည်အသွေးရှိတဲ့ ကစားသမားဖြစ်ပေမယ့် စီရော်နယ်လ်ဒို အဆင့်ရောက်ဖို့ အချိန်ယူရဦးမယ်။ အရင်တုန်းက ကမ္ဘာ့အဆင့်ကစားသမားတွေ ခေါ်ယူပြီး ကြယ်စင်စုအသင်းအဖြစ် တည်ဆောက်ခဲ့တဲ့ ရီးယဲလ်ရဲ့ နောက်ပိုင်းအပြောင်းအရွှေ့ ဆောင်ရွက်မှုတွေက စိတ်ပျက်စရာပါပဲ။
ရီးယဲလ်အသင်းရဲ့ အဓိက ကစားသမားတွေ တော်တော်များများ ဒီရာသီမှာ ပုံမှန်ခြေစွမ်း ပြသနိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူး။ အထူးသဖြင့် အကျပိုင်းရောက်လာတဲ့ မိုဒရစ် Modric ပါ ။ ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီ၊ ၂၀၁၈ ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲတွေမှာ ခြေစွမ်းပြခဲ့တဲ့ မိုဒရစ်ဟာ ဒီရာသီမှာတော့ Below Par ဖြစ်နေတယ်။ နောက်ထပ် လက်ညှိုးထိုးရမှာက အမာခံနောက်ခံလူတွေဖြစ်တဲ့ ရာမို့စ် Ramos နဲ့ ဗာရန်း Varane ပါ။ ကမ္ဘာ့အဆင့် နောက်ခံလူဂုဏ်ပုဒ်နဲ့ မလော်ျညီတဲ့ အမှားတွေ နှစ်ယောက်စလုံး ကျူးလွန်နေကြတယ်။
ဒီရာသီ ရီးယဲလ်အသင်းရဲ့ ပွဲတိုင်းလိုလို ခံစစ်ပိုင်း အားနည်းချက်တွေကို ပရိသတ်တွေ မြင်တွေ့ရမှာပါ။ ရီးယဲလ်အသင်းကစားခဲ့တဲ့ ပြိုင်ပွဲစုံ (၁၉)ပွဲမှာ (၇)ပွဲသာ Clean Sheets ရခဲ့တယ်။ ဒီရာသီ လာလီဂါမှာ အဝေးကွင်း သွားရောက်ကစားခဲ့တဲ့ပွဲတွေမှာ (၁၉)ဂိုးအထိ ပေးခဲ့ရပြီး သူ့ထက် ပေးဂိုးပိုများတာက Huesca (၁၉ဂိုး)ပဲရှိပါတော့တယ်။ ချန်ပီယံဆု မှန်းတဲ့အသင်းအနေနဲ့ ဒီလောက်အထိ ပေးဂိုးများနေရင်တော့ သူတို့ရဲ့ မျှော်လင့်ချက်ကို လက်လွှတ်ရမှာပါ။
စီရော်နယ်လ်ဒို မရှိတာဟာ ကြီးမားတဲ့ ပြဿနာတစ်ခု မဟုတ်ပေမယ့် ကျန် စီနီယာကစားသမားတွေဖြစ်တဲ့ ဘန်ဇီမာ Benzema ၊ ဂါရတ်ဘေးလ် Gareth Bale တို့ဟာ အသင်းကို ဦးဆောင်နိုင်စွမ်း မရှိတာတော့ ပြဿနာဖြစ်သွားပါပြီ။ တကယ့်ကျဉ်းထဲကျပ်ထဲ ရောက်လာရင် အသင်းကို စုစုစည်းစည်းဖြစ်အောင် ဦးဆောင်နိုင်မယ့် Super Star Player မရှိတာက အခု ရီးယဲလ်အသင်း ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ အခက်အခဲပါပဲ။ အသင်း ဂိုးလိုနေတဲ့အချိန်မှာ စီရော်နယ်လ်ဒိုလို ကြုံသလိုဂိုးသွင်းမယ့်သူ မရှိပါဘူး။
ဒီရာသီ ရီးယဲလ်အသင်း ရုန်းကန်နေရတဲ့အချက်တွေထဲမှာ ဒဏ်ရာပြဿနာတွေကြောင့်လည်း ပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ အီဘာနဲ့ပွဲမှာလည်း ညာနောက်ခံလူ အိုဒရီယိုဇိုလာ ဒဏ်ရာထပ်ရသွားပြန်ပြီ။ အဓိက ကစားသမားတွေထဲမှာလည်း ဒဏ်ရာကြောင့် ပါတစ်လှည့် မပါတစ်လှည့်ဖြစ်နေတာက အသင်းရဲ့ တည်ငြိမ်မှုကို ထိခိုက်စေတယ်။
ဒါတွေကတော့ ဒီရာသီ ရီးယဲလ်အသင်းရဲ့အနေအထားကို Marca သတင်းစာက သုံးသပ်ဖော်ပြခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ရီးယဲလ်အသင်းအနေနဲ့ လက်ကျန်ပွဲစဉ်တွေမှာ အခု ရလဒ်ဆိုးတွေ ကျော်လွှားပြီး လမ်းကြောင်းမှန်ပေါ် ရောက်လာမလားဆိုတာကတော့ . . .
Photo:Marca,Managing Madrid,Stretty News,Getty Images,Sports Illustrated
ရလဒျတှေ ဆိုးရှားနတေဲ့ ရီးယဲလျအသငျး ဘာတှေ မှားနသေလဲ
ခနျြပီယံလိဂျဖလားကို (၃)နှဈဆကျတိုကျ ရယူခဲ့ပွီး စပိနျဘောလုံးလောကမှာ အောငျမွငျမှု အမြားဆုံးလို့ သတျမှတျရမယျ့ ရီးယဲလျအသငျး ဒီရာသီမှာတော့ ဆိုးဆိုးရှားရှားကို ရုနျးကနျနရေတယျ။ ပွီးခဲ့တဲ့ လာလီဂါပှဲစဉျ(၁၃)မှာ အီဘာကို (၃)ဂိုးပွတျရှုံးနိမျ့ခဲ့တာကွောငျ့ အဆငျ့(၆)နရောမှာ ရပျတညျနရေသလို ခံစဈပိုငျးကလညျး (၁၉)ဂိုးအထိ ပေးထားရပါတယျ။ ဒါဟာ (၁၀)စုနှဈတဈခုအတှငျး အဆိုးရှားဆုံး ခံစဈစှမျးဆောငျရညျပါ။
စီရျောနယျလျဒို Cristiano Ronaldo ၊ ဇီဒနျး Zidane တို့ကို တဈပွိုငျနကျတညျး ဆုံးရှုံးလိုကျရတဲ့ ရီးယဲလျအသငျး အခုဆိုရငျ ရာသီအစပိုငျးမှာပဲ နညျးပွအပွောငျးအလဲ လုပျခဲ့ပွီးပါပွီ။ နညျးပွသဈ ဆိုလာရီ Santiago Solari လကျထကျမှာ ရလဒျကောငျးတှေ ပွနျရလာပမေယျ့ အီဘာကို ရှုံးနိမျ့ခဲ့ပွီး အရှိနျတနျ့သှားခဲ့ရတယျ။ ဒါကွောငျ့ ဒီရာသီမှာ ရုနျးကနျနရေတဲ့ ရီးယဲလျအသငျး ဘာတှမှေားယှငျးခဲ့လဲဆိုတာ စပိနျနာမညျကြျော အားကစားသတငျးစာ Marca က အခုလိုသုံးသပျဖျောပွထားပါတယျ . .
ဒါကတော့ ရီးယဲလျအသငျး ကရြှုံးမှုတှမှော အဓိကကတြဲ့ အခကျြလို့ဆိုရမယျ။ ရီးယဲလျအသငျးဟာ ခနျြပီယံလိဂျ၊ လာလီဂါ၊ စပိနျဘုရငျ့ဖလား စဈမကျြနှာပွငျ(၃)ခုမှာ တိုကျပှဲဝငျရမယျဆိုတာက မနေ့သေလိုပါပဲ။ ဒီစဈမကျြနှာပွငျ(၃)ခုမှာ တိုကျပှဲဝငျဖို့ လုံလောကျတဲ့ ကစားသမားအငျအားကို မဖွညျ့တငျးခဲ့ပါဘူး။
စီရျောနယျလျဒိုလို တဈရာသီကို အနညျးဆုံးဂိုး(၄၀)လောကျ သှငျးခဲ့တဲ့ ကစားသမားမြိုးကို ရောငျးခခြဲ့ရုံမကဘဲ ကှငျးလယျအငျဂငျြလို့ သတျမှတျရမယျ့ ကိုဗာခဈြ Kovacic ကို ခယျြလျဆီးဆီ အငှားခခြဲ့ပွီး အဲဒီအတှကျ ထိပျတနျးကစားသမားတှေ ချေါယူတာမြိုးလညျး မရှိခဲ့ဘူး။ တခွားအခကျြတှထေကျ စီရျောနယျလျဒိုရဲ့နရောကို အစားထိုးဖို့ မပွငျဆငျခဲ့တာတော့ ဆိုးရှားလှနျးတယျ။ နောကျတဈခုက သူတို့ချေါယူခဲ့တဲ့ ကစားသမားတှကေ ထှကျသှားတဲ့သူတှနေရောမှာ အစားဝငျဖို့ အရညျအသှေး မပွညျ့ဝတာပါပဲ။
နာဗတျဈ Navas လို ဂိုးသမားရှိရဲ့သားနဲ့ ကျောတိုအာ Courtois ကို မလိုအပျဘဲ ချေါခဲ့သလို ညာနောကျခံလူအတှကျ အိုဒရီယိုဇိုလာ Odriozola ကလညျး အရေးတကွီး လိုအပျတာမြိုး မဟုတျပွနျဘူး။ New No7အဖွဈ သတျမှတျခဲ့တဲ့ မာရီယာနို Mariano က အရညျအသှေးရှိတဲ့ ကစားသမားဖွဈပမေယျ့ စီရျောနယျလျဒို အဆငျ့ရောကျဖို့ အခြိနျယူရဦးမယျ။ အရငျတုနျးက ကမ်ဘာ့အဆငျ့ကစားသမားတှေ ချေါယူပွီး ကွယျစငျစုအသငျးအဖွဈ တညျဆောကျခဲ့တဲ့ ရီးယဲလျရဲ့ နောကျပိုငျးအပွောငျးအရှေ့ ဆောငျရှကျမှုတှကေ စိတျပကျြစရာပါပဲ။
ရီးယဲလျအသငျးရဲ့ အဓိက ကစားသမားတှေ တျောတျောမြားမြား ဒီရာသီမှာ ပုံမှနျခွစှေမျး ပွသနိုငျခွငျးမရှိသေးပါဘူး။ အထူးသဖွငျ့ အကပြိုငျးရောကျလာတဲ့ မိုဒရဈ Modric ပါ ။ ပွီးခဲ့တဲ့ရာသီ၊ ၂၀၁၈ ကမ်ဘာ့ဖလားပွိုငျပှဲတှမှော ခွစှေမျးပွခဲ့တဲ့ မိုဒရဈဟာ ဒီရာသီမှာတော့ Below Par ဖွဈနတေယျ။ နောကျထပျ လကျညှိုးထိုးရမှာက အမာခံနောကျခံလူတှဖွေဈတဲ့ ရာမို့ဈ Ramos နဲ့ ဗာရနျး Varane ပါ။ ကမ်ဘာ့အဆငျ့ နောကျခံလူဂုဏျပုဒျနဲ့ မလြေျာညီတဲ့ အမှားတှေ နှဈယောကျစလုံး ကြူးလှနျနကွေတယျ။
ဒီရာသီ ရီးယဲလျအသငျးရဲ့ ပှဲတိုငျးလိုလို ခံစဈပိုငျး အားနညျးခကျြတှကေို ပရိသတျတှေ မွငျတှရေ့မှာပါ။ ရီးယဲလျအသငျးကစားခဲ့တဲ့ ပွိုငျပှဲစုံ (၁၉)ပှဲမှာ (၇)ပှဲသာ Clean Sheets ရခဲ့တယျ။ ဒီရာသီ လာလီဂါမှာ အဝေးကှငျး သှားရောကျကစားခဲ့တဲ့ပှဲတှမှော (၁၉)ဂိုးအထိ ပေးခဲ့ရပွီး သူ့ထကျ ပေးဂိုးပိုမြားတာက Huesca (၁၉ဂိုး)ပဲရှိပါတော့တယျ။ ခနျြပီယံဆု မှနျးတဲ့အသငျးအနနေဲ့ ဒီလောကျအထိ ပေးဂိုးမြားနရေငျတော့ သူတို့ရဲ့ မြှျောလငျ့ခကျြကို လကျလှတျရမှာပါ။
စီရျောနယျလျဒို မရှိတာဟာ ကွီးမားတဲ့ ပွဿနာတဈခု မဟုတျပမေယျ့ ကနျြ စီနီယာကစားသမားတှဖွေဈတဲ့ ဘနျဇီမာ Benzema ၊ ဂါရတျဘေးလျ Gareth Bale တို့ဟာ အသငျးကို ဦးဆောငျနိုငျစှမျး မရှိတာတော့ ပွဿနာဖွဈသှားပါပွီ။ တကယျ့ကဉျြးထဲကပျြထဲ ရောကျလာရငျ အသငျးကို စုစုစညျးစညျးဖွဈအောငျ ဦးဆောငျနိုငျမယျ့ Super Star Player မရှိတာက အခု ရီးယဲလျအသငျး ရငျဆိုငျနရေတဲ့ အခကျအခဲပါပဲ။ အသငျး ဂိုးလိုနတေဲ့အခြိနျမှာ စီရျောနယျလျဒိုလို ကွုံသလိုဂိုးသှငျးမယျ့သူ မရှိပါဘူး။
ဒီရာသီ ရီးယဲလျအသငျး ရုနျးကနျနရေတဲ့အခကျြတှထေဲမှာ ဒဏျရာပွဿနာတှကွေောငျ့လညျး ပါတယျ။ ပွီးခဲ့တဲ့ အီဘာနဲ့ပှဲမှာလညျး ညာနောကျခံလူ အိုဒရီယိုဇိုလာ ဒဏျရာထပျရသှားပွနျပွီ။ အဓိက ကစားသမားတှထေဲမှာလညျး ဒဏျရာကွောငျ့ ပါတဈလှညျ့ မပါတဈလှညျ့ဖွဈနတောက အသငျးရဲ့ တညျငွိမျမှုကို ထိခိုကျစတေယျ။
ဒါတှကေတော့ ဒီရာသီ ရီးယဲလျအသငျးရဲ့အနအေထားကို Marca သတငျးစာက သုံးသပျဖျောပွခဲ့တာပဲဖွဈပါတယျ။ ရီးယဲလျအသငျးအနနေဲ့ လကျကနျြပှဲစဉျတှမှော အခု ရလဒျဆိုးတှေ ကြျောလှားပွီး လမျးကွောငျးမှနျပျေါ ရောကျလာမလားဆိုတာကတော့ . . .